Nkwa Dị Iche Iche Chineke Ga-emezu n’Alaeze Ya—Chineke Ga-eme Ihe Niile Ka Ha Dị Ọhụrụ | Alaeze Chineke
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ọ̀ na-agụsi gị agụụ ike ịhụ mgbe Chineke ga-emere anyị ihe ndị o kwere anyị ná nkwa?
KA E were ya na e nwere otu ụbọchị ị gara ịghọ apụl. Ka ị nọ na-aghọ ya, gị ahụ nke gbara agba chara ezigbo ọchịcha. Gị aghọrọ ya, ísì ọma ya ekuba gị n’imi. Gị ewerezie ya tinye na nkata i tinyejuru ndị ọzọ. Ị nọ na-aghọ apụl kemgbe ụtụtụ, ma ike agwụbeghị gị, ị chọrọ ịghọtakwu. Ị nọ ebe ahụ ị nọ lepụ anya, hụ mama gị na ụfọdụ ndị ikwu na ibe unu bịara inyere ya aka. Ka ha nọ na-aghọ apụl a, ha ana-akparịta ụka, na-achịkwa ọchị. Obi dị mama gị ezigbo ụtọ. Mama gị a dị ka agbọghọbịa. Gị ana-ele ya, cheta na otú a ọ dị ugbu a ka ọ dị mgbe ị ka bụ nwata ọtụtụ afọ gara aga. Gị ana-ajụ onwe gị ma onye a ọ̀ bụkwadị mama gị ahụ ị hụrụ mgbe ọ kara nká n’ụwa ochie. Ihe ọzọ gbatakwara gị n’obi bụ oge ya na ọrịa nọ na-alụ n’ụwa ochie ahụ, gị abịa jide ya aka n’aka, o teghịkwa aka ya ekubie ume. I chetakwara ákwá i bere mgbe a nọ na-eli ya. Ma, ọ bụ ya ka ị na-ahụ ka ya na ọtụtụ ndị ọzọ nọ, ahụ́ dịkwa ya ezigbo mma.
O doro anyị anya na ụdị ihe a ga-emerịrị otu ụbọchị. Olee otú anyị si mara? Anyị ma na ihe a ga-eme n’ihi na Chineke kwuru na ya ga-eme ya. Ọ na-emezukwa nkwa ọ bụla o kwere. Na nkebi nke asaa a, anyị ga-eleba anya n’otú Chineke ga-esi emezu ihe ụfọdụ o kwuru na ya ga-eme n’oge na-adịghị anya. Ọ ga-eme ihe ndị ahụ tupu a lụọ agha Amagedọn. Anyị ga-elebakwa anya n’ụfọdụ nkwa ndị magburu onwe ha Chineke ga-emezu n’Alaeze ya mgbe a lụchara agha Amagedọn. Obi ga-atọ anyị ezigbo ụtọ mgbe Alaeze Chineke ga na-achị ụwa niile ma mee ihe niile ka ha dị ọhụrụ.
I nwere ike ijikere ugbu a maka agha Amagedọn.
Olee ihe ga-eme ka obi sie gị ike na Jehova ga-emezu nkwa niile o kwere?